ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကျနော့်အတွင်းရေးမှူးမလေးကို အလုပ်ဖြုတ်ပစ်ရသည့်အကြောင်း”
Labels: Joke, translation
>>> Moe Cho Thinn ……. ကျနော် ဒီဟာသကို ဖတ်တုန်း ကတော့ နောက်ဆုံးနေရာရောက်တော့ ရယ်မိတာ အကျယ်ကြီးဘဲ။ အခုတော့ ဘာသာပြန်ထားတာ မူရင်းလို ရယ်ရပါ့မလားလို့ စိတ်ပူနေတာ။
ဟုတ်တယ်... ဖတ်ဖူးပြီးသား ။ ကိုယ့် computer ကပျက်နေတော့ရုံးမှာ ဘလော့ခိုးဖတ် ၊ ခိုးရယ် ၊ ဟဲ ဟဲ .... အခုလဲ ပါးတွေတောင်ညောင်းတယ် ။
သိပါဘူး ကိုပေါများ ၄၅ နှစ်ပြည့်သွားတာလားလို့
ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ကြောင့်များ အတွင်းရေးမှူးမလေး အလုပ်ပြုတ်သလားလို့.... ခုတော့ :D
တော်တော် ပြောင်တဲ့ Secretary ပဲ.. ရီရတယ်ဗျို့ 
ဟုတ်ပဗျာ။ ဒီလူ (၄၅)နှစ်ပြည့်တောင် ရှိပြီပဲလို့ ထင်လိုက်တာ။
ခင်ဗျားရဲ့ဇာတ်လိုက်ကတော့ အတော်ဆိုးတယ်။ စိန်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ်အထိလိုက်မယ် ဆိုတာမျိုးပဲ။ (ဟားဟား)တကယ်ရယ်တာဗျ။
>> Thant …. နှစ်ထပ်ရှိမှ မှတ်မိမှာမို့… ထပ်ဖတ်လိုက်ပါဦး။
>> Rita …. များက ၄၅ နှစ်ပြည့်ဖို့ အဝေးကြီးလိုသေးတယ်။
>> mysterysnow …. အခု အတွင်းရေးမှူးမပြုတ်ဘဲ ကိုယ်ပြုတ်ကိန်းဆိုက်နေတယ်။ ဖြုတ်တဲ့အခါ လျော်ကြေးစို့စို့ပို့ပို့လေးနဲ့ ဖြုတ်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းနေရတယ်။ တနှစ်လောက် ဘလော့ထိုင်ရေးချင်လို့။း-)
>> naynyoyint …. ရယ်မောနိုင်ကြပါစေဗျိုး။း-)
>> ksanchaung …. စိတ်ကြီးတယ်။ စိန်ခေါ်လို့မရဘူး။း-)
>> မခင်ဦးမေ… ခုနက ကွန်မင့်ဖတ်တာမှားသွားလို့ ကွန်မင့်ကို ပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ အထောက်အထားခိုင်လုံသည့်အတွက် တရားသေလွှတ်လိုက်သည်။း-)
YouTube Video link: "Why I Fired My Secretary " :D
ကြည့်သွားပါ၏။ you tube
>>> HaHa …. Good video!!! Thanks.
>>> khin oo may …. ၁၈ နှစ်အောက် မကြည့်ရ။း-)
By reading your blog recently,
U Know What....!
Abit of Porn...!
Abit of Funny...!
Abit of Drama....!
And Nobody Business..!!
And Nothing Deliver Good Things to People...!!
You are really Good in this area..!.
Hi, Ko Paw,
This comment is not only giving alert to you, but also to all Myanmar Blogs.Now, our country is facing difficulty for Rohingya.It is totaly rediculous.Some of the medias from outside are giving favor for the Rohingya.Some are so quiet. How Stupid !!!
They (medias) must see the face of Myanmar People and country.
We all Myanmar people can not accept them as Myanmar. We need to defend our religion and country.
WE CAN NOT ACCEPT THESE GUYS FOR SURE!!
HI! GENTLEMAN ,
I want to strongly urge you instead of writting non-sense post, pls consider and write whatever things that can be good for country and myanmar people.
To both Anonymous : February 28, 2009 11:10 AM,
What the fucking nonsense you are talking about!
Who the hell you think you are!